I-Chalet esandul' ukwakhiwa yomlambo - I-Airbnb
I-Chalet esandul' ukwakhiwa yomlambo
Indlu yeholide eyakhiwe ngamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguJudith
Sela ikofu yakho yakusasa phantsi komthi we-hemlock, ukusuka elunxwemeni lomlambo ubukele amaxhalanga e-bald ebhabha ukuya kwiindlwane zawo. Relax kwi-tub eshushu okanye uqokelele malunga ne-no-fuss propane firepit kwidesika. Le chalet esandula ukwakhiwa, enamagumbi okulala amathathu ibonelela ngendawo yokuhlala yabucala kwihlathi laseAcadian elunxwemeni loMlambo iWest of Pictou.
Igumbi elikhulu elivulekileyo lizaliswe kukukhanya okuvela eludongeni olupheleleyo lweefestile ezijongene nomlambo, kunye neembono ezivela macala onke ukuya ehlathini ngaphandle. Umgangatho ophambili unamagumbi okulala amabini, igumbi lokuhlambela eligcweleyo, kunye neendawo zokuhlambela, ngelixa igumbi eliphezulu eliphambili libonelela nge-ensuite eneshawari. Ikhitshi lixhotyiselwe ngokupheleleyo ukupheka kunye nokuphakela izidlo, kwaye iquka izinto ezongezelelekileyo ezifana ne-waffle maker, umatshini we-popcorn, i-blender kunye nomenzi wekofu we-Keurig. Umgangatho ophakamileyo wendlu yokufihla intloko ubonisa umabonakude oyi-55 ″ eneenkonzo zokusasaza, inkqubo yeWii, imidlalo yebhodi kunye nedesika / indawo yokusebenzela. I-WiFi iyafumaneka.
Phuma kwigumbi lokuhlala uye kwidesika ejikelezileyo apho uya kufumana indawo yokucima umlilo yepropane ejikelezwe zizitulo zeAdirondack, ibhafu eshushu kunye nebarbecue. Izitepsi eziya emlanjeni ongezantsi zinendawo yokujonga izinto eziphilayo nezinokubonwa ngokubanzi kunye nokufikelela emanzini. Qalisa i-kayak okanye iphenyane ukusuka kwidokhi edadayo kunye nokubheqa phezulu. Hlala ujonge izilwanyana zasendle kulo mlambo ulwandle kwaye unokubona amaxhama, amafudo, iibeaver, iiotter, iintini, okanye iintlanzi eziqhekezayo. Indawo yokuzonwabisa yeentaka, apho kukho ukutyelelwa ngamaxhalanga, ookhetshe, izikhova, iiblue jay, iintonga, amahobe, iirobin, iinkonjane, iiphixa nezinye. Okanye ukuba uthanda, phosa intambo yakho kwaye uzame i-bass enemigca, i-white perch, okanye i-trout (ngokwemimiselo yephondo) kulo mlambo ubalaseleyo wokuloba.
IWest River Chalet yimizuzu engama-20 yokuqhuba ukusuka kumanxweme amahle anesanti ecaleni kweNorthumberland Strait ezonwabela awona manzi ashushu eMpuma Canada (Waterside Beach kunye neCaribou-Munroe's Island Provincial Parks).
Umtsalane okufutshane odumileyo yiShelby Ranch (imizuzu esi-7 yokuqhuba), ineendlela zokukhwela, ukukhwela iponi, ukukhwela iinqwelo, ukukhwela isileyi kunye nefama yokufutha, inkunzi yomatshini kunye neziganeko zosapho unyaka wonke.
Idolophu ebukekayo yasePictou (ikhaya lembali "yeShip Hector") kukuhamba nje kwemizuzu eli-10, ibonelela ngeendawo zokutyela ezingasemanzini kunye neevenkile, iZiko leDecoste lokuzonwabisa okuphilayo, kunye negrosari, ivenkile ethengisa utywala, ikhemesti, iibhanki kunye nokutya okukhawulezayo. .
Indawo ebalaseleyo yokukhwela intaba, le ndawo ineendlela zazo zonke izakhono ezithatha iikhilomitha ezininzi kunye nokunxibelelana kuthungelwano lwephondo. Amanqaku aphambili abandakanya iFitzpatrick Mountain Trail, iDurham Hill Trail, iDalhousie Mountain Trail, iJitney Trail, iJuniper Head Trail, iGreen Hill Provincial Park kunye neTrail, kunye neTrans Canada Trail, enokufikelelwa kwimizuzu nje yepropathi.
Ime malunga nesiqingatha sendlela ye-Sunrise Trail, iWest River Chalet yindawo esembindini yokuphonononga unxweme lwaseNova Scotia ekumntla-mpuma. Emantla-ntshona, jonga ngaseTatamagouche nangaphaya ukufumana iibala zegalufa, iifama, iilwandle kunye needolophu ezintle ezibonelela ngeendawo zokutyela ezilungileyo, iivenkile ezimibalabala, kunye neegalari zobugcisa. Ngena kumzantsi-mpuma ukuya ngaseAntigonish, udlula kwiMelmerby Beach edumileyo, ukufumana iifosili kuLwandle lweCliffs lwaseArisaig. Ndwendwela iCape George Point Lighthouse kunye neBallantyne's Cove, kwaye ungene kwidolophu yaseyunivesithi yaseAntigonish. Jonga kwakhona imephu ethi "Good Cheer Trail" ukutyelela ezinye zeewayini ezinkulu, ii-breweries kunye ne-distilleries endleleni.
Qhagamshelana nam nangaliphi na ixesha ngemibuzo okanye iinkxalabo malunga nepropati. Injongo yam kukwaneliseka kwe-100%.
Inombolo yomthetho: RYA-2021-09170848127861094-25